६५ लाख चिनियाँ विदेश भ्रमणमा, नेपालमा कति? - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
६५ लाख चिनियाँ विदेश भ्रमणमा, नेपालमा कति?
लक्ष्मी लम्साल बेइजिङ माघ २८
गतवर्ष नयाँ वर्षमा बैंककमा रमाउँदै चिनियाँ पर्यटक
पर्यटकीय सिजनको यो शिखर समय खेर फाल्नु भनेको कुनै किसानले असारमा मानो रोप्न भुले जस्तै हो जसबाट मुरी फलाउने सपनामाथि आघात पर्नेछ।
पश्चिमा पात्रो अनुसार भ्यालेन्टाइन डेको प्रेमिल वातावरण नसकिँदै चिनियाँहरूको जीवनमा वसन्ती चञ्चलताले छोप्ने सिजन भित्रिएको छ। अर्थात् चिनियाँ परम्परागत पात्रो अनुसार नयाँ वर्ष वा वसन्त चाड आइपुग्यो।
एक हप्ता लामो विदा मनाउनका लागि चिनियाँहरू झिटीगुण्टा तयार पारेर, देशभित्र वा देशबाहिरको यात्राका लागि टिकट काटेर ठिक्क परेका छन्।
फेब्रुअरी १५ देखि २१ सम्म चिनियाँहरूको चाडवाड मनाउने अवधि बनेको छ। अरू पर्वभन्दा यो नै लामो विदाको पर्व भएकाले विदेश भ्रमणको एउटा राम्रो अवसर पनि हो। श्रम संगठनको नियम मुताविक चिनियाँहरू कार्यालयका दिनहरूमा ८ घण्टा डटेर अनुशासनपूर्वक काम गर्छन्। कार्यस्थलमा जोडिएका सिसिक्यामराका कारण काम ठग्न वा सेवाग्राहीलाई झुलाउन पनि त सजिलो छैन।
अनुशासनमा बाँधिएर देशको सेवा गर्ने चिनियाँहरू व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको धक फुकाउन तड्पिरहेका बेला वसन्त चाडको हप्तादिन लामो विदा पुनर्ताजगीको स्वर्णिम अवसर गुमाउने पक्षमा पक्कै छैनन्।
वसन्त चाड अवधिमा अधिकांश चिनियाँले स्वयं निर्णय गरेर गन्तव्य रोज्ने गरेको पाइन्छ। ५० प्रतिशत चिनियाँ परिवारले सात दिने विदामा यस्तो यात्रा गर्नेछन्। उच्च गुणस्तरीय सेवा तथा ब्राण्डेड ट्राभल एजेन्सीहरू रोज्नेहरू पैसा भन्दा पनि सेवामा केन्द्रित भएका छन्। यस वर्ष ४० प्रतिशत घुमुवाहरूले नामी ट्राभल एजेन्सीमार्फत् रिजर्भ गरिसेकका छन् भने ६.२ प्रतिशतले सस्तो र कम परिचित एजेन्सीमार्फत् बुक गरेका छन्।
वसन्त चाडको व्यस्तताका लागि चिनियाँ पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरू पूर्ण तयारीमा बसेका छन्। यस वर्षको पर्यटनका लागि विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूले धमाधम हटलाइन सेवा दिन थालिसकेका छन्।
भूकम्पपछि पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न नेपाल आएका चिनियाँ पर्यटक
झण्डै ६५ लाख चिनियाँ विदेश घुम्दै
चिनियाँहरूको वसन्त चाडको विदामा सेवा दिनका लागि हरेक देशहरूले तीव्र तयारी गरेका छन्। दुबईको पर्यटन प्राधिकरणले अनअराइभल भिसा नीति लिएपछि सन् २०१६ को तुलनामा २०१७ मा ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ लाख ६४ हजार पुगेको जनाएको छ। पर्यटन तथा वाणिज्य बजारीकरण विभागले दिएको जानकारी अनुसार पर्यटकीय क्षेत्रहरूको तीव्र मर्मत तथा सिर्जना गरेर सन् २०२० पर्यटन भिजनको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि लागिपरेको बताएको छ। युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, सामुद्रिक मुलुकहरू लगायतले अनेकन सुहलियतका कार्यक्रम संचालन गरेका छन्। चिनियाँका लागि अधिकतर लचकता अपनाउने विषयमा अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूबीच पनि होडबाजी देखिन्छ।
पर्यटक भित्र्याउन हरेक देशले आ–आफ्नै तयारी गरेपनि नजीकको छिमेकीको नाताले नेपालले के तयारी गरिरहेको छ? चिनियाँ नयाँ वर्षको विदा र नेपालमा वसन्त ऋतुको आगमन लगभग उस्तै समयमा परेकाले भ्रमणका लागि निकै उपयुक्त समय हो।
पर्यटन गर्नु नै चिनियाँले वसन्त चाड मनाउने एक महत्वपूर्ण तरिका बनेको छ। चीनको राष्ट्रिय पर्यटन ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार, यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा चिनियाँ जनताको यात्रा चाहनाको अनुपात ८८ प्रतिशत पुगेको छ भने तीमध्ये लगभग आधा पर्यटकले वसन्त चाडको अवधिमा बाहिर घुम्ने छनौट गरेका छन्।
जीवन शैलीमा आएको परिवर्तनले उपभोक्ताको व्यवहार र आनीबानीमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ। खानपान र पर्यटनमा मानिसका रूचि र मागहरू बढ्दै गएका देखिन्छन्। जब मानिस घुम्न निस्किन्छन्, अनुभव र आरामदायी यात्राका लागि निकै ध्यान दिन्छन्। अर्काको देशमा कष्ट झेल्न त कोही पनि जान चाहँदैन। मस्ती कसरी पाइन्छ भन्नेतर्फ नै ध्यान हुन्छ। यात्रामा स्वस्थ रहन सकियोस् भनेर स्तरीय खानेकुराका लागि खर्च गरिएको हुन्छ। एउटा तथ्य अनुरूप रोजगारीको दृष्टिकोण, व्यक्तिगत वित्त तथा खर्चको चाहना गरी चीनको उपभोक्ता आत्मविश्वास सूचकांक अघिल्लो वर्षको भन्दा सन् २०१७ मा ६ अंकले बढेर ११२ अंक टेकेको छ।
प्रकाशित २८ माघ २०७४, आइतबार | 2018-02-11 13:01:31